Betsiaka Antsiranana: matahotra valifaty ny mpiaro ny ala | NewsMada
Betsiaka Antsiranana: matahotra valifaty ny mpiaro ny ala
Manaitra ny sain’ny fitsarana hampihatra ny sazy henjana amin’ireo mpanimba ny tontolo iainana, tratra ambody omby tany Betsiaka Ambilobe, ny mpiaro ny tontolo ianana any an-toerana. Manaitra ny fiarahamonim-pirenena koa hanaraka akaiky ity raharaha ity satria mihorohoro ireo mponina any ifotony.
Miisa valo lahy ireo tratra ambody omby, ny 2 oktobra teo, nanao saribao tsy ara-dalàna tao anaty faritra afovoany tena tsy azo idirana sady tsy azo kasihina tanaty faritra arovana tany Betsiaka, distrika Ambilobe, faritra Diana. Nahatrarana basy poleta vita gasy iray tao anaty entan’izy ireo. Taorian’ny nampiakarana azy ireo fampanoavana, omaly, naiditra am-ponja vonjimaika ny fito ary nomena fahafahana vonjimaika ny iray. Manoloana izany, manao antso avo ny tompon’andraikitra, indrindra ny ao amin’ny fitsarana ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mponina any ifotony, ny mpisafo ala sy ny Komity miaro ny tontolo ianana (KMT) any Betsiaka, ny hampiharana ny sazy henjana amin’ireo voarohirohy, izay tratra ambody omby (tao anaty ala tsy azo idirana).
Matetika maivana ny sazy
Manaitra ny fiarahamonim-pirenena koa ireo mponina any ifotony, hanaraka akaiky ity raharaha ity. Fantatra fa misy koa ny fampihorohoroana azy ireo. “Matetika maivana ny sazy, na tafavoaka mora foana ireo voarohirohy na tratra ambody omby aza, ka lasa mandrahona ho faty na manao herisetra anay”, hoy izy ireo.
Tsiahivina fa maro ny tompon’andraiki-panjakana nandray anjara tamin’ny atrikasa, nokarakarain’ny Alliance voahary gasy (AVG), mikasika ny fampiharana ny lalàna mifandraika amin’ny tontolo iainana, natao tany Antsiranana, ny taona 2018. Nahitana mpitsara, mpisolo vava, zandary sy polisy, fiarahamonim-pirenena, fikambanana miaro ny tontolo ianana, sns. Nisy koa fotoana manokana niarahana tamin’ny vondrona olona ifotony sy ny mpisafo ala.